यस्ता छन् महिलाले आफू भन्दा बढी उमेरको पुरुष खोज्ने कारणहरु, जानी राखौ
अगस्ट 20, 2019 अगस्ट 20, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	पुरुष, महिला
यस्ता छन् महिलाले आफू भन्दा बढी उमेरको पुरुष खोज्ने कारणहरु, जानी राखौ ! हामीले समाजमा हेर्यौंन भने अधिकाँश जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपपाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नै हुन्छन् । यस्तो किन हुन्छ होला । खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । यहाँ महिलाले बढी उमेरको पुरुष खोज्ने कारणको चर्चा गरिएको छ ।
पाको उमेरका पुरुक्षमा बाहिरी दुनियाँको ज्ञान बढि हुन्छ । आफ्नो प्रेमी वा पतिले आफूलाई दुनियाँका विभिन्न कुरा’bout जानकारी दिएको महिलाहरुलाई मन पर्छ । यस्ता पुरुषमा सही या गलत छुट्टाउन क्षमता हुने पनि महिला ठान्छन् । खासमा महिलाहरु हरेक प्रश्नको जवाफ पति वा प्रेमीले नै देओस भन्ने चाहन्छन् ।
महिलाहरु छिटो आत्तिने र रिसाइरहने हुन्छन् । साना साना कुरामा पनि आत्तिनु र रिसाइ हाल्ने महिलाको बानी हो । त्यसकारण यस्तो कुरा बुझ्नका लागि र सम्हाल्नका लागि पाका उमेरका पुरुषको खोजीमा महिलाहरु हुन्छन् । आफूलाई मानसिक रुपमा सम्हाल्न सक्ने र ढाडस दिन सक्ने पुरुषलाई पति वा प्रेमी बनाउन महिलाहरु उद्दत हुन्छन् ।
← पूर्व प्रेमीको ’boutमा केटीहरु के सोंच्छन् ? यस्ता छन् १० कुराहरु
घिउ यसकारण खानुहोस् →
नोभेम्बर 14, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1